Qaraxyo 30 qof ku dhinteen oo ka dhacay dalka ........ - iftineducation.com
Qaraxyo 30 qof ku dhinteen oo ka dhacay dalka ……..
iftineducation.com – Labo qarax ayaa ka dhacay bartamaha magaalada Jos ee dalka Nigeria. Goobjooge ayaa sheegaya in ugu yaraan sodon qof ay ku dhinteen qaraxyadaas.
Weeraro is xigxigay ayaa ka dhacayay waqooyiga Nigeria iyada oo magaalada Jos sidoo kalena la bartilmaameedsaday bishii May ee la soo dhaafay.
Mas’uuliyiinta ayaa sheegay in dhammaan qaraxyadaan ay ka danbeeyaan kooxda jihaaddoonka ah ee Boko Haram.
Labada qarax ayaa ka dhacay goob u dhow meel dadka dukaameysanaya lana dhigto gawaarida oo ku taalla bartamaha magaalada Jos. Labada qarax ayaa si dhaqsa isugu xigay.
Qaraxyadaan ayaa ka dhacay meel boqol mitir u jirta goob ay Bishii may qarax ka dhacay oo ay ku dhinteen in kabadan boqol qof.
Magaalada Jos ayaa ah magaalo ay ku nool yihiin dad kala diimo ah ee Nigeria, xubno looga shakisan yahay in ay yihiin kooxda Boko Haram ayaa sanadahaan weeraro ku qaadayay kaniisadaha taas oo u muuqatay arrin lagu doonayay in looga dhex abuuro dagaal diimeed.
Kooxda Jihaadiga ayaa ka geysata qaraxyo kala duwan toddobaad kasta waqooyiga Nigeria inkastoona xoogagga ammaanka ay ku guuleestaan in ay ka hor tagaan qaar ka mid ah, balse intooda badan ayaa ahaa qaraxyo ismiidaamin oo dad badan ay ku dhinteen.
Bishii la soo dhaafay, israsaaseyn iyo qaraxyo ka dhacay dalkaasi ayaa sababay dhimashada in kabadan 800 oo qof.
Daawo Muuqaal Filimkii :- ” Eaten Alive” oo fashil ku dhamaaday & Aktarkii uu Maska cunay oo Tv-ga la hor keenay.
Xanuun aan la aqoon oo dilay 9 qofood muqdisho